Xildhibaan Cabdi Barre “Xukuumad Tii ugu Tayada Xumeyd ayaa Waddanka ka Talisa” – Goobjoog News
Xildhibaan Cabdi Barre Yusuf oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo aan la yeelanay wareysi gaar ah ayaa xukuumadda federaalka Soomaaliya ku tilmamay tii ugu tayada xumeyd ee dalka Soomarta.
Xildhibaan Barre oo ay Goobjoog News ka wareysatay qaraxyadii shalay hotel SYL ayaa tilmamaay in markasta dhiigga shacabka Soomaaliyeed uu meel cidlo ah ku daato, hay’adaha amniguna ay ku fashlimeen sugidda ammaanka Muqdisho.
Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la magacaabo dad amniga wax ka yaqaanna oo ka hortagi kara weerarada al-Shabaab ay marwalba la beegsadaan Hotelada; halka uu shacabkana ugu baaqay iney isku tashadaan ammaankoodana ka fakaraan;
“Shacabka Soomaaliyeed ee Xamar joogaa ha tashadeen, ha sameysteen ciidamo amni oo iyaga u diyaarsan ilaaliya goobohooda gacansiga iyo Hoteladooda oo adag ha sameysteen, dowlad ka fakareysa ma lahan, dowladdii la rabay iney waxaysana waxay ku mashquulsan yihiin Soomaaliya wax burburinaya”, ayuu yiri xildhibaanka.
Xildhibaanku waxa uu aad u dhaliilay waxqabadka hay’adaha amniga oo uu ku tilmamaay iney kulan sadeen aqoondarro iyo karti xumo:
“Waa ayaan darro weyn, hay’adaha amnigana waxaan leeyahay iyo qof kasta oo mas’uul ah, inta aad ummaddiina ka xishootaan ha oranina waanu fashilinnay, fashil waxaa la yiraahdaa in laga hortago inta aaney dhibka geysan oo aaney waxba sameyn in laga hortago. Laakiin 100 qof baa ku dhimaneysa intaas ayaa ku dhaawacmeysa, waxbaanu fashilinnay aqoon daridaa keenaysa, karti xumidaa keenaysa, meeshan hay’adihii amniga awoodoodii baa maqan, daryeelkii ciidanka ayaa meesha ka maqan”.
Xildhibaan Cali Barre waxa uu ku tilmamay xukuumadda hadda jirta tii ugu kartida xumeyd ee dhawaanahan waddanka soo martay:
“Xukuumad tii ugu tayada xumeyd ayaa waddanka ka talisa, maanta haddaan mas’uul ama ra’isul wasaare ahaan lahaa ama taliye ciidan ahaan lahaa waan is casili lahaa, maxaayeelay; waxbaan qaban waayay oo waan fashilmay, dalku isbedel buu u baahan yahaye, hay’adaha amniga isbedel ha lagu sameeyo oo dalka waxa lagu maamulayo halaga daayo, xukuumadaan aan xafiiska lahayn hoggaankana aan lahayn ee meesha ku baaba’day, labada bilood ee u hartay ha is casileen”.
Maalinimadii shalay ayaa waxaa magaalada muqdisho ka dhacay qarax weyn oo lala eegtay Hotel SYL ee agaagaarka madaxtooyada Soomaaliya, iyadoo ay halkaa ku nafwaayeen dad shacab u badnaa oo gaarayay illaa 20 qof, halka ay dhaawacyo kala duwan kasoo gaareen dad lagu qiyaasay illaa 40 ruux.